UpSnap: Mobile dị ọnụ, Obodo, na Mgbasa Ozi ezubere iche | Martech Zone
UpSnap na-enye netwọkụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye ihe karịrị otu ijeri echiche kwa ọnwa. Site na mmekọrịta ha na ụfọdụ saịtị kachasị, ha na-enwe ike igosipụta mgbasa ozi na netwọkụ ndị ọzọ na ọnụego nke ihe karịrị 100 ijeri echiche kwa ọnwa. UpSnap na-enyere gị aka ịchụ ndị ahịa ndị nọ nso azụmahịa gị. Ozugbo mkpọsa gị dị ndụ, UpSnap ga-egosipụta mgbasa ozi mkpanaka gị na ndị ahịa n'ime okirikiri kilomita ise. Ebumnuche na-agbasawanye na mpụga dabere na nnweta okporo ụzọ na okirikiri ịchọrọ.
UpSnap na-enye ihe niile site na mgbasa ozi mgbasa ozi na ịkọ akụkọ:
I debanye aha, nweta oku site na onye ọkachamara na MobileS ka ịmechaa nkọwa nke mkpọsa mgbasa ozi mkpanaka gị.
UpSnap ga-emepụta ma depụta peeji ọdịda na mgbasa ozi ọkọlọtọ maka azụmahịa gị. Ihe ikwesiri ime bu ka ichoputa ihe.
A ga-egosipụta mgbasa ozi gị ruo oge 20,000 kwa ọnwa na narị narị saịtị dị elu na ngwa maka naanị $ 100 / mo.
Bido ịnata oku, na nleta ụlọ ahịa na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, inwere ike inyocha onodu mkpọsa gị na kwa ọnwa nchịkọta akụkọ.
UpSnap na-enye mgbasa ozi mgbasa ozi siri ike dabere na ọnọdụ, onye nkwusa, ngwa mkpanaaka yana profaịlụ ndị ahịa.
SNAPalytics na-enye nnukwu data nchịkọta nye ndị mgbasa ozi kacha nta. Ghọta omume onye ọrụ ma soro na-eme mkpọsa oge iji chebe ndị na-eri ihe n'otu oge ha dị njikere itinye aka.
Tags: ọdịdị alamgbasa ozi mpagharaMgbasa ozi dabere na ọnọdụnetwork ad networkmobile ala mgbasa ozimobile mpaghara mgbasa oziezubere iche maka mkpanakabulite
Ọkt 11, 2016 na 12:19 PM
Ụlọ ọrụ anyị na-etinye ego na ngwugwu nnwale na Upsnap. Efufu ego na oge zuru oke. Enweghị nzaghachi, enweghị ụzọ, enweghị akụkọ.
Elala oge gị.